Omar Sayid Abdilahi: Soo dhawayntii Xildhibaan Mohamed Khadar Dahir
Soo dhawayntii Xildhibaan Mohamed Khadar Dahir
Maanta oo ah Khamiis taariikhduna tahay 14/01/2016, waxa madaarka caasimada aan ku soo dhaweeyay Musharax Mohamed Khadar Dahir oo dalka dib ugu soo laabtay ka dib safar caafimaad oo uu ku tagay dalka India.
Sidoo kale Maxamed Khadar waa Sxb igu dheer oo ilaa yaraantii aanu sxb ahayn, waa halyay ku sifoobay sifooyin badan oo ay adagtahay in laga helo dadka sabanka nool.
Maxamed waxaan u rajaynayaa guul doorashada soo socota, sidoo kale waxaan isla maanta isla hal duulimaad la socday Maydka Marxuum Abwan Cali sugule Dun carbeed oo laga soo dajiyay garoonka si loogu aaaso xabaalaha naasa hablood ee magaalada Hargiesa.
Ilaahay ha u naxariisto Cali Sugule wuxuu ahaa tiir dhexaadka fanka casriga ah ee Somaliyeed.
Waxaanu subaxdii hore intaan diyaaradu iman aanu wada sheekaysanay fanaanada qaran ee caanka ah Khadra Dahir Cige, oo wax badan nooga sheegtay Abwan Cali Sugule.
Waxyaabaha xiisaha lahaa ee ay khadra iyo Macalin Mataan oo nagu soo biiray aanu wadaagnay waxa ka mid ahaa in Cali sugule iyo tiimkiisa fanaaniinta hargiesa ay dageen Xaafada dumbuluq iyaga oo la baxay Somali Music and Sports Club, ka dib markay is khilaafeen koox kale oo iyaguna Reer Hargeisa ah oo daganaa Xaafada Daruuraha.
Xafiiltan dheer ka dib xaruntii Dumbuluq ayaa ka saamayn badatay tii Daruuraha oo iyadu sanado badan camirnayd oo calanka sidatay.
Isaga oo arintaas cabiraya waxa uu Cali Sugule Yidhi
" Haday daantaasi daruuro lahayd
Dadkii Janadaa lugaynaayoo
Dumbuluq dayaxbaa u soo baxay"
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:55 PM
Shirkii bilaha ahaa ee Wasaarada iyo Qudbadaydii
Qalin jabintii Caalami Schools +700 ardey